အာကာသစခန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိတော့ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာမြေသို့ကျရောက်လိမ့်မည်ဟုတရုတ်ကကြေငြာခဲ့သည် Gadget သတင်း
အာကာသစခန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိတော့ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာမြေသို့ကျရောက်လိမ့်မည်ဟုတရုတ်ကကြေငြာခဲ့သည်
အာကာသစခန်းထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုအပြီးတွင်တရုတ်နိုင်ငံမှလွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကမှကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် Tiangong-1နောက်ဆုံးမှာတော့အရှုံးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ တစ်ချိန်ချိန်တွင် 2017 ခုနှစ်တွင်ကကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကျလိမ့်မည် အာကာသစခန်း၏ထိန်းချုပ်မှုကိုတရုတ်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း မှလွဲ၍ အခြားကျွမ်းကျင်သူအချို့ကလပေါင်းများစွာကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ရာကိုအတည်ပြုခြင်း။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အာကာသအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရနောက်ဆုံးမှာတော့ Tiangong-1 ဟာလူသိများတဲ့အရာထဲကို ၀ င်ရောက်ပြီဆိုတာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်။ပတ်လမ်းယိုယွင်းဆိုလိုသည်မှာအာကာသစခန်းသည်ကမ္ဘာမြေဆွဲငင်အားကြောင့်ဆွဲယူလိုက်သောအခါ၎င်း၏ပတ်လမ်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာသည်။ ဤကိစ္စတစ်ခုလုံး၏စိတ်ရှုပ်စရာအပိုင်းမှာဝမ်းနည်းစရာမှာ၎င်းကိုသာလူသိများခြင်းဖြစ်သည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် 2017 ခုနှစ်တွင်ကကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကျလိမ့်မည် သော်လည်း ဘယ်အချိန်မှာဘယ်မှာမသိဘူး.
Tiangong-1 သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လျှင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းသို့သွားမည့်စီမံကိန်းအကြောင်းပြောရမည်။ ပြvariousနာအမျိုးမျိုးကြောင့်၎င်းလွှတ်တင်မှုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပေမယ့် 2010 သည်အထိပတ်လမ်း မျှော်လင့်ထားနှစ်ဆထက်ပို။ အသေးစိတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကစပြီးကန ဦး အစီအစဉ်အရအာကာသယာဉ်မှူးအားလုံးအိမ်ပြန်ဖို့မုန်းတီးခဲ့ကြပြီးကတည်းကတရုတ်အာကာသစခန်းဟာမလှုပ်မရှားဖြစ်နေဆဲပဲ။
အာကာသထဲသို့ပို့လွှတ်သောအရာဝတ္ထုများကဲ့သို့ပင်သူတို့အလုပ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ၎င်းတို့သည်သမုဒ္ဒရာအလယ်သို့ကျသွားလျှင်ဖြစ်စေ၊ လေထုအတွင်းပြိုကွဲသွားခြင်းဖြစ်စေသေချာစေရန် ၄ င်းတို့၏ပတ်လမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားသောနည်းလမ်းဖြင့်လျှော့ချရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ။ အာကာသစခန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်သို့မည်သည့်အချိန်၌ ၀ င်လာမည်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကမသိသောကြောင့်ဤကိစ္စသည် Tiangong-1 ကိစ္စတွင်မဟုတ်ပါ ဖြစ်နိုင်သောသက်ရောက်မှုရှိသည့်နေရာကိုသိရန်စာသားအတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နည်းပညာ » အာကာသစခန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိတော့ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာမြေသို့ကျရောက်လိမ့်မည်ဟုတရုတ်ကကြေငြာခဲ့သည်
iPhone7ကိုဝယ်စရာအကြောင်း ၇ ချက်ရှိသည်
ကျနော်တို့ SkyController နှင့်အတူ Bebop2စမ်းသပ်ပြီး